16. Indriya Paccaya | Dhamma Training Center
တိုင်းပြည်၏ အနာဂတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြသည့် လူငယ်မောင်မယ်များ ယဉ်ကျေးလိမ္မာပြီး စာရိတ္တမဏ္ဍိုင်မြင့်မားကာ အမျိုးဘာသာသာသနာကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်သည့် လူတော်လူကောင်းများပေါ်ထွန်းလာစေရန်။
၁- လယ်ဝေးမြို့နယ် သပြေပင် ရန်ကင်းတောရ ပရိယတ် ပဋိပတ်ဌာနတွင် တနင်္ဂနွေအပါတ်စဉ်ဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိသော အဘိဓမ္မာအမြင်ဖွင့် သင်တန်းကို ရန်အောင်မြင်တောရ(မြို့တော်ဝန်ကျောင်း) သံတမန်ဇုန်နှင့် ရတနာမဉ္စ (R)3လမ်း အကြား၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် နေပြည်တော်သို့ ပြောင်းရွှေဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
၂- နေပြည်တော် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ရန်အောင်မြင်တောရကျောင်း (မြို့တော်ဝန်ကျောင်း) နေပြည်တော်ယဉ်ကျေးလိမ္မာစင်တာ
Dhamma Training Center ၌ ၂၀၂၀ ပြည့် မတ်လတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်းများ - (မတ်လ ၇ မှ ၁၃ ထိ) * ကိုရင် ၊ သီလရှင် ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်း ( Novice and Nun Buddhist Culture Course)
(၅-တန်း၊ ၆-တန်း၊ ၇-တန်း၊ ၈-တန်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ)
(မတ်လ၂၀ မှ ၂၅ ထိ) * ဓမ္မကျာင်းတော် ယဉ်ကျေးလိမ္မာလူငယ်အမြင်ဖွင့်သင်တန်း (Buddhist Culture Course for Youth Dhamma Training Center)	(၁၀-တန်းဖြေထားသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ)
ဖုန်း— 09 797 303021 — 09 430 757 04
1. Hetu Paccaya
2. Arammana Paccaya
3. Adhipati Paccaya
4. Anantara Paccayo
5. Samanantara Paccayo
6. Sahajata Paccaya
7. Aññamañña Paccaya
8. Nissaya Paccaya
9. Upa-nissaya Paccaya
10. Purejāta Paccaya
11. Pacchājā Paccaya
12. Āsevana Paccaya
13. Kamma Paccaya
14. Vipāka paccaya
15. Āhāra Paccaya
16. Indriya Paccaya
17. Jhāna Paccaya
18. Magga Paccaya
19. Sampayutta Paccaya
20. Vippayutta Paccaya
21. Atthi Paccaya
22. Natthi Paccaya
23. Vigata Paccaya
24. A-vigata Paccaya
Dec4th, 2019
၁၆- ဣန္ဒြိယပစ္စယော PDF file Indriya Paccayo (Faculty condition)
၁၆- ဣန္ဒြိယပစ္စယော PDF file Indriya Paccayo (Faculty condition)...
Read more | Comments 0
Nov 12 th, 2019
၁၆-ဣန္ဒြိယပစ္စယော Indriya Paccaya (Faculty condition) pdf file (all in one)
Indriya Paccaya PDF file ...
Nov 8 th, 2019
၁၆-ဣန္ဒြိယပစ္စယော Indriya Paccaya (Faculty condition) Roman pali and English (1 of7)
၁၆-ဣန္ဒြိယပစ္စယော Indriya Paccaya (Faculty condition) Roman pali and English (1 of7) 16. Indriyapaccayoti – cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ indriyapaccayena paccayo. Sotindriyaṃ sotaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca...
၁၆-ဣန္ဒြိယပစ္စယော Indriya Paccaya (Faculty condition) ပါဠိနှင့်မြန်မာပြန် (2 of7)
၁၆-ဣန္ဒြိယပစ္စယော Indriya Paccaya (Faculty condition) ပါဠိနှင့်မြန်မာပြန် (2 of7) ၄၃၀။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ ဣန္ဒြိယပစ္စယေန ပစ္စယော။(ကု၊ကု-၁)ပါဠိနှင့်မြန်မာပြန် ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား ဣန္ဒြိယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ ကုသလာ ဣန္ဒြိယာ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ...
၁၆-ဣန္ဒြိယပစ္စယော Indriya Paccaya (Faculty condition) ရုပ်ဣနြေ္ဒနှင့်နာမ်ဣနြေ္ဒ (3 of7)
၁၆-ဣန္ဒြိယပစ္စယော Indriya Paccaya (Faculty condition) ရုပ်ဣနြေ္ဒနှင့်နာမ်ဣနြေ္ဒ (3 of7) zawgyi (က-၁) ပါဠိစာပေတွင်လာရှိသည့် ဣန္ဒြိယကိုမြန်မာဘာသာဖြင့် ဣနြေ္ဒဟု တိုက်ရိုက် သုံးနုံးပါသည်။ ဣနြေ္ဒ၏ မြန်မာဘာသာ စကားအဓိပ္ပါယ်မှာ”အစိုးရသည်” ။ အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် Faculty ဟုပြန်ဆိုနိုင်ပါသည်။...
၁၆-ဣန္ဒြိယပစ္စယော Indriya Paccaya (Faculty condition) ယောက်ျားဘ၀မှ မိန်းမဘ၀သို့ ပြောင်းသွားသော သောရေယျသူဌေးသား(4 of 7)
၁၆-ဣန္ဒြိယပစ္စယော Indriya Paccaya (Faculty condition) ယောက်ျားဘ၀မှ မိန်းမဘ၀သို့ ပြောင်းသွားသော သောရေယျသူဌေးသား(4 of 7) ဣတ္ထိနြေ္ဒ နှင့် ပုရိသိနြေ္ဒ (ဃ-၁) ဣတ္ထိနြေ္ဒ နှင့် ပုရိသိနြေ္ဒနှစ်ပါးသည် ရုပ်ဣနြေ္ဒများဖြစ်ကြသည်။ ဘာဝရုပ်ဟုလည်း ခေါ်ပါသည်။ (ဃ-၂)ပုမ္ဘာဝရုပ်ဟူသည် အထီးသတ္တ၀ါဖြစ်လာနိုင်ရန် အကြောင်းခံဖြစ်သော...
၁၆-ဣန္ဒြိယပစ္စယော Indriya Paccaya (Faculty condition) ၀ိပဿနာဟူသည် ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကို ရှုပွားနေခြင်းပေတည်း (5 of 7)
၁၆-ဣန္ဒြိယပစ္စယော Indriya Paccaya (Faculty condition) ၀ိပဿနာဟူသည် ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကို ရှုပွားနေခြင်းပေတည်း (5 of 7) zawgyi ရုပ်ဇီဝိတနှင့် နာမ်ဇီဝိတ (င-၁) နာမ်တရား၊ ရုပ်တရားဟူသည် စိတ်-၈၉ပါး၊ စေတသိက်-၅၂ပါး၊ ရုပ်-၂၈ပါး၊နိဗ္ဗာန်တို့ဖြစ်၏။ ၄င်းတို့ သည် ပရမတ္ထတရားများ...
၁၆-ဣန္ဒြိယပစ္စယော Indriya Paccaya (Faculty condition) သုဗြဟ္မာနတ်သားဝတ္ထု (6 of 7)
၁၆-ဣန္ဒြိယပစ္စယော Indriya Paccaya (Faculty condition) သုဗြဟ္မာနတ်သားဝတ္ထု (6 of 7) zawgyi ဆန္ဒထက်သန်သူမှသာ အရိယာဖြစ်မည် (ဆ) စိတ်ဆန္ဒထက်သန်သူသာ အရိယာဖြစ်မည် ၁။ သီလသိက္ခာကို စောင့်ထိမ်းရာ၌ စိတ်ဆန္ဒထက်သန်၏။ ၂။တရားကို ဆင်ခြင်ရာ၌ စိတ်ဆန္ဒထက်သန်၏။ ၃။ကိလေသာတဏှာကို...
၁၆-ဣန္ဒြိယပစ္စယော Indriya Paccaya (Faculty condition) သေခြင်းတရား (7 of 7)
၁၆-ဣန္ဒြိယပစ္စယော Indriya Paccaya (Faculty condition) သေခြင်းတရား (7 of 7) zawgyi သေခြင်းသဘောတရား (ဇ-၁) အာယုဥသ္မာ ၀ိညာဏံ ၊ယဒါ ကာယံ ဇဟန္တိမံ၊ အပ၀ိဒ္ဓေါ တဒါ သေတိ၊နိရတ္ထံဝ ကလိင်္ဂရံ။ အာယုအသက်ဟူသော...
Dhamma Training Center -လမ်း၌ယဉ်ကျေးခြင်း၊ ခရီးသွားစဉ်ယဉ်ကျေးခြင်း-ဓမ္မကျောင်းတော် နည်းပြဆရာဖြစ်သင
Dhamma Training Center -လမ်း၌ယဉ်ကျေးခြင်း၊ ခရီးသွားစဉ်ယဉ်ကျေးခြင်း-ဓမ္မကျောင်းတော် နည်းပြဆရာဖြစ်သင ...
Dhamma Training Center ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာမင်္ဂလာ – ဓမ္မကျောင်းတော် နည်းပြဆရာဖြစ်သင်တန်း သင်ခန်းစာ
Dhamma Training Center ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာမင်္ဂလာ – ဓမ္မကျောင်းတော် နည်းပြဆရာဖြစ်သင်တန်း သင်ခန်းစာ ...
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၂၂ – နတ္ထိပစ္စယော Natthi Paccayo (Absence condition)PDF File
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၂၂ – နတ္ထိပစ္စယော Natthi...
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၂၀ – ဝိပ္ပယုတ္တပစ္စယော Vippayutta Paccayo (Dissociation condition)PDF File
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၂၀ – ဝိပ္ပယုတ္တပစ္စယော Vippayutta...
Dhamma Training Center © 2020